जापानको शरणार्थी नीति सम्बन्धित थाहापाई राख्नु पर्ने तथ्य । | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > जापानको “रेफुजी पोलिसी” (शरणार्थी नीति) सम्बन्धित थाहापाई राख्नु पर्ने तथ्यहरु ।
सन् १९५१ को रेफुजी कनबेन्सनको (शरणार्थी सम्मेलन) अनुसार शरणार्थी भनेको जाति, धर्म, राष्ट्रियता, वा सामाजिक कारणले गर्दा आफ्नो देशमा बस्न असमर्थ भैई अन्य देशमा शरण लिने व्यक्ति हो। यो अनेकौ कारण ले हुन सक्छ जस्तै; द्वन्द, हिंशाले वा अन्य कुनै राजनैतिक समस्या। जापान सरकारले यदि कोहि व्यक्ति त्यस्तो डरले आफ्नो देश छोडेर आएको छ भने मानवअधिकारको नाताले शरणार्थीको परिचय दिन्छ। यहि शरणार्थी नीतिको बिषयमा थाह पाउनु पर्ने केहि जानकारी आज हामि हजुरहरुलाई गराउने छौ।
आवेदन प्रक्रिया र नियम
जापानमा शरणार्थीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा सहितको अन्य अधिकारको शुनिस्चितता संगै लामो समय सम्म बस्न पाउने “लङ्ग टर्म स्टे” पाउदछन। PR को लागि पर्ने आबेदन पनि शरणार्थीहरुको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। उसलाई पहिलेको देश वा अन्य खतरा भएको देश पथाईदैन। तर शरणार्थी आबेदन गर्नेले पनि जापानको नियमहरु सम्मान पुर्वक मानी गलत जानकारी दिएर आफ्नो जापान बस्न मिल्ने अबधि उल्लङ्घन गर्नु हुदैन। आबेदन गरेर शरणार्थीको परिचय वा मान्यता पाउन ६ महिना जतिको समय लाग्दछ। रेफुजी शरण पाउनको लागि गर्नु पर्ने तयारि तल दिइएको छ।
१. शरणार्थीको आबेदन जापान आएको ६ महिना भित्र गर्नु पर्ने छ। ढिलोमा पनि आफुले नियमपूर्व बस्न पाउने अबधि भित्र आबेदन दिनु पर्छ। आबेदनले धेरै समय लागेमा आफ्नो बसाई लम्ब्याउन “एक्सटेन्सन ओफ स्टे” को अनुरोध गर्न सकिन्छ।
२. आबेदन स्वीकार भएपछी ईमिग्रेसन ब्युरोको रेफुजी इन्क्वाइररसंग हजुरको इन्टरभ्यु एक वा त्यो भन्दा बढी पटक हुनेछ। इन्टरभ्युमा आफ्नो साथि वा वकिल लीएर आउन पाइदैन। अनि सोधिएको प्रश्नको ईमान्दार पुर्वक जवाफ दिनु पर्दछ। इन्टरभ्युको अन्त्यमा हजुरले डकुमेन्टमा साईन गर्नु पर्नेछ।
३. हजुरको आबेदन अस्विकार गरिएमा, मिनिस्ट्री अफ जस्टिसमा अपिल आबेदन दिन पाईन्छ। यो पहिलो आबेदनको नतिजा आएको ७ दिनमा गरि सक्नु पर्दछ।
४. अपिलको आबेदन पछि रेफुजी काउन्सेलर संग अर्को इन्टरभ्यु लिन सकिनेछ। यो इन्टरभ्यु एक चोटी मात्र हुन्छ र अलि लामो हुन्छ। त्यसपछि हजुरलाई नतिजा सुनाईन्छ।
५. अपिलको आबेदन पनि अस्विकार भएको खण्डमा ६ महिना भित्र जुडिसल रिभ्यु गर्न सकिन्छ। हजुरको डकुमेन्ट फेरी एक पाताल हेरिन्छ। त्यसको लागि केहि पैसा भने लाग्न सक्छ।
शरणार्थीको मान्यता ?
शरणार्थी आबेदन दिएकाहरुमा आफुलाई आफ्नो देशमा खतरा भएको सबुत हुनु पर्दछ। यसलाई “प्रुफ अफ पर्सिक्युसन” भनिन्छ। सानो तिनो झै झगडाहरु मान्य हुदैनन्। ज्यानलाई खतरा आइलाग्ने समस्या जस्तै परिवारमा आक्रमण, गिरफ्तारी, सम्पतिमाथि हस्तक्षॆप, धार्मिक र जातिय हिंशा केहि उदाहरण हुन्। शरणार्थी संग जति बलियो सबुत हुन्छ त्यतिनै मान्यता पाउए अवसर हुन्छ। जापानमा हुने आबेदन धेरै जसो एसियाको मुलुकबाट आउछ। सन् २०१३ को अनुसार धेरै आबेदन आएका मुलुकको टप ५ मा टर्की, नेपाल, म्यान्मार, श्रीलंका, पाकिस्तान र इन्डिया पर्दछ। तर सबै आबेदन स्वीकार भई सबैले रेफुजिको मान्यता पाउने भन्ने हुन्न। सन् २०१६ मा रेउतेर्स.कामका अनुसार ८१९३ आबेदन मध्य जम्मा २८ जनाले रेफुजिको मान्यता पाएका थिए।
जापान एक ग्लोबल मानब अधिकार संरक्षक देश हो। यो अमेरिका पछिको UNHCR को सबै भन्दा ठूलो दाता पनि हो। अझ जापान UNHCR को पुनर्वास कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने एक मात्र एसिया देश हो। तर पनि जापानले रेफुजिको मान्यता भने निकै कमलाई मात्र दिने गरेको छ। टेलिग्राफको अनुसार जापानले ९९% शरणार्थी को आबेदन अस्विकार गर्दछ। रेफुजीको मान्यता पाएकाहरुलाई पनि जापानी जीवनमा घुलमिल हुन निकै समस्या रहेको पाईएको छ।
शरणार्थीको आबेदन दिन खोज्नु भएकाहरुले कृपया जापान शरणार्थी संघठन वा ईमिग्रेसन ब्युरो अफ जापानमा थप जानकारी लिनुहोस्।
तलका लेखहरुमा शरणार्थी नीति सम्बन्धित थप केहि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नु हुने छ।
रेफुजी आबेदन दिन चाहनेहरुको लागि
Ministry of Justice Applications (नेपालीमा पनि उपलब्ध छ)
यदि हजुरले दुर्भाग्यवश रेफुजी आबेदन दिनु परेको खण्ड हर सम्भव सबै नियम र निर्देशन अपनाउनुहोस। शरणार्थी नभएर रोजगारी भिजामा पनि जापान आउन सकिन्छ। जापान अरु देशको तुलनामा कठिन शरणार्थी नीतिको लागि जानिन्छ। तर जापानको जनसंख्या घट्नेक्रममा भएकोले जापानले अनेक नीति अपनाएर बिदेशी भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दिन आउनेछ। के थाह भबिस्यमा जापानको शरणार्थी नीति सजिलो भई सुरक्षा खोज्नेहरुको लागि यो देश राम्रो गन्तब्य बन्न सक्नेछन कि ?